Aragtida Iran ee ku Aadan Maraykanka oo aan wali la badalin – Radio Daljir
Luulyo 18, 2015 8:28 b 0
Sabti, Luuliyo 18, 2015 (Daljir) —Hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iiraan, Cali Khaamin’ii, ayaa maanta oo sabti ah khudbadii salaada ciida ka sheegay, in mowqifka dalkiisa ee ku wajahan dalka Mareeykanka uu halkiisi yahay.
Khaamin’ii oo kumanaan shacab ah kula hadlay fagaara ku yaala magaalada Dhahraan ee caasimadda dalkaas, xilli uu halkaas ka jeedinayay khudbadda salaada Ciida ayaa waxuu sheegay, in inkasoo heshiis laga gaaray malafkii niukleyrka dalkaas, hadana weli ay mareykanka ku khilaafsan yihiin malafaad badan oo la xiriira siyaadaha mareeykanka ee ku wajahan guud ahaan dunida, gaar ahaan BARIGA DHEXE.Madaxweynaha aan awooda badan laahyn ee dalkaas Xassan Ruuxaani, ayaa sidoo kale goobta ku sugnaa.
Dadweynihii goobta isugu yimid, ayaa sidii caadada u ahayd ruxayay sawirada Hogaamiyahooda diiniga ah, iyo weliba halkudhagyadii lagu yaqiinay, ee ka dhanka ahaa, Israaiil iyo Mareeykanka, sida:
“Geeri ha u sugnaato Mareykanka, iyo Israil. Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee iiran, kama gaabin doonto taageerada saaxibadeeda bariga dhexe, sida, shucuubta la caburiyo ee dalalka Yaman, Filasdhiin, iyo Baxreyn. Sidoo kale, isbarbartaaga shacabka iyo xukuumadaha dalalka Suuriya iyo Ciraaq. iyo weliba dagaal yahannada baariyaasha ah ee Libnaan” (xizbullaata)